यसरी मेल खाँदै कलियुगसँग युधिष्ठिरको त्यो 'पूर्णआभास' | Citizen Post News
पाण्डवहरुको अज्ञातवाश समाप्त हुनमा केही समय शेष रहेको थियो । पाँचै पाण्डव एवम् द्रौपती जंगलमा लुक्ने स्थान खोज्दै थिए । उता शनिदेवको आकाश मंडलबाट पाण्डवहरु प्रति नजर पर्यो । शनिदेवको मनमा विचार आयो कि यी पाँचमा बुद्धिमान को छ ? शनिदेव परीक्षा लिन तल आए ।
उनले एक मायाको महल बनाए । कैयौं योजन दूरीमा त्यस महलको चार कुना थियो-पुर्व, पश्चिम, उतर, दक्षिण । अचानक भीमको नजर महलमा पर्यो र उनी आकर्षित भए । भीमले युधिष्ठिरलाई भने-'दाइ मलाई महल हेर्नुछ । के म जान सक्छु ?'
युधिष्ठिरको अनुमतिपछि भीम महलको द्वारमा पुगे । त्यहाँ शनिदेव दरबानको रूपमा खडा थिए । भीमले भने-मलाइ महल हेर्नुछ ।
शनिदेवले भने-महलको केही शर्त छ ।
पहिलो शर्तः महलमा चार कुना छ, तिमीले एक मात्रै कुना देख्न सक्छौं ।
दोस्रो शर्तः महलमा जे देख्छौं, त्यसको सारसहित व्याख्या गर्नुपर्छ ।
तेस्रो शर्तः यदी व्याख्या गर्न सकेनौं भने कैदी भएर बस्नुपर्छ ।
भीमले भने-मलाइ स्वीकार छ यस्तै हुन्छ ।
र, उनी महलको पूर्वतिर गए । त्यहाँ गएर उनले अद्भूत पशु पक्षी र फूल एवम् फलले लादिएको वृक्षहरुको दृश्य देखे । अगाडी देखे कि तीन कुवा अगल, बगलमा सानो कुवां र बीचमा एउटा ठुलो कुवा । बिच वाला ठुलो कुवामा पानीको छाल आउँछ र दुइटा सानो खाली कुवालाई पानीले भर्छ ।
फेरी केही बेर पछि दुवै सानो कुवामा छाल आउँछ । खाली भएको ठुलो कुवाको पानी आधा रहन्छ । यस क्रियालाई भीमले धेरै पटक हेरे । तर उनको समझमा आएन र फर्किएर दरबानको पास आइपुगे ।
दरबान-के देख्यौं तिमीले ?
भीम-महाशय मैंले रुख वृक्ष पशु पंक्षी देखेँ, त्यो मैले पहिला कहिल्यै देखेको थिइन, जुन अनौठो थियो । एउटा कुरा समझमा आएन कि सानो कुवा पानीले भरिन्छ । ठुलो किन भरिएन यो बुझिन ।
दरबान-तिमी शर्त अनुसार बन्दि भयौं । र, बन्दी घरमा हाली दिए ।
त्यसैगरी, अर्जुन आएर भने-मलाई महल हेर्नुछ । दरबानले शर्त बतायो र अर्जुन पश्चिम तिरको कुनामा गए । त्यहाँ गएर अर्जुनले एउटा खेतमा दुई बाली उम्रिएको देखे । एक तरफ बाजराको फसल अर्कोतिर मकै बाली । बाजराको बोटबाट मकै निस्केको थियो तथा मकैको बोटबाट बाजरा निस्केको थियो । अनौठो लाग्यो केही बुझेनन् । वापस द्वारमा गए ।
दरबानले सोधे कि तिमीले के देख्यौं ?
अर्जुनले भने-महाशय सब थोक देखे । तर बाजरा र मकैको बात समझमा आएन ।
दरबानले भन्यो-शर्त अनुसार तिमी बन्दी भयौं ।
नकुल आएर भने-महल हेर्नुछ । फेरी उनी उत्तर दिशा तिर गए । त्यहाँ उनले देखे कि धेरै सारा सेता गाई जब उनीहरुलाई भोक लाग्थ्यो । तब आफू भन्दा साना बाच्छिहरुको दूध पिउँथे । उसको समझमा केही आएन, र उनी द्वारमा आए ।
दरबानले सोधे के देख्यौं ?
नकुलले भने-महाशय गाईले बाच्छिको दुध पिएको यो समझमा आएन । उनलाई पनि बन्दी बनाइयो ।
सहदेव आएर भने-महल हेर्नुछ र उनी दक्षिण दिशा तिर गए । अन्तिम कुना हेर्दा त्यहाँ एउटा सुनको ठुलो शिला एक चांदीको सिक्कामा अडिएको डगमग गर्दै छुदाँ पनि रहन्थ्यो । उनको समझमा आएन । उनी वापस द्वारमा आएर भने कि सुनको शिलाको कुरा मेरो समझमा आएन । त्यहीबेला उनी पनि बन्दी भए ।
चारैजना भाई धेरै बेर आएनन् तब युधिष्ठिरलाई चिन्ता भयो । उनी पनि द्रोपदीसहित महलमा गए । भाइहरुको बारेमा सोधे-तब दरबानले बताए कि शर्त अनुसार बन्दी बनाइयो ।
युधिष्ठिरले सोधे-भीम तिमीले के देख्यौं ?
भीमले कुवाको बारेमा बताए ।
तब युधिष्ठिरले भने-यो कलियुगमा हुने वाला हो । एउटा बाउले दुईटा छोराको पेट त भर्छ, परन्तु दुई वटा छोरा मिलेर एउता बाउको पेट भर्दैनन् । भीमलाई छोडी दियो ।
अर्जुनलाई सोधे तिमीले के देख्यौं ?
उनले फसलको बारेमा बताए ।
युधिष्ठिरले भने-यो पनि कलियुगमा हुने वाला छ । वंश परिवर्तन अर्थात ब्राह्मणको घरमा शूद्रकी छोरी र शूद्रको घरमा बानियाको छोरीको बिहे हुन्छ । अर्जुन पनि छुटे ।
नकुलसंग सोधे-तिमीले के देख्यौं ? तब उनले गाईको वृतान्त सुनाए ।
तब युधिष्ठिरले भने-कलियुगमा माताहरु आफ्नी छोरीहरुको घरमा पालिन्छिन् । छोरीको दाना खान्छिन् र छोराले सेवा गर्दैनन् । तब नकुल पनि छुटे ।
सहदेवलाई सोधे-तिमीले के देख्यौं ? उनले सुनको शिलाको वृतान्त बताए ।
तब युधिष्ठिरले भने-कलियुगमा पापले धर्मलाइ दबाइ रहन्छ । परन्तु धर्म फेरी पनि जिउँदो रहन्छ, खतम हुदैन् । आजको कलियुगमा यो सारा कुरा सही साबित भइरहेको छ । #गणेशजी